Yekuzvidira zororo: chii icho, ndiani anogona kuchikumbira uye sei | Ehupfumi Zvemari
Encarni Arcoya | 26/07/2021 09:07 | Basa
Paunenge uchinge uchinge uchishanda mune rimwe basa kwenguva yakareba, dzimwe nguva kusakara uye kubvarura kunoita kuti usazogona pane zvaunogona. Kunyangwe paine mazororo ekudzokazve uye kuita recharge, pane chimwe chimiro chisingazivikanwe nevazhinji, asi izvo zvinogona kunakidza kufunga nezvazvo. Tiri kutaura nezvekuzvidira zororo.
Asi, Chii chinonzi zororo rekuzvidira rekusavapo? Une kodzero dzipi? Ndiani angaishandisa? Iwe unodha sei? Kana iwe uchida kuziva zvakawanda pamusoro peiyi nhamba inofungidzirwa muVashandi Statute, pamwe nemimwewo mitemo, pano tinokuudza zvakawanda nezvazvo.
1 Chii chinonzi kuzvipira zororo
2 Ndiani anogona kukumbira zororo rekuzvidira
3 Maitiro ekukumbira zororo rekuzvidira rekusavapo
4 Dzokera kubasa
5 Maitiro ekukumbira kupinda-zvakare kukambani
Chii chinonzi kuzvipira zororo
Kuti titsanangure zororo rekuzvidira, tinofanira kutanga taenda kuchinyorwa 46 cheVashandi 'Statute, kana ET, uko kunotevera zvinotevera:
"1. Zororo rekusavapo rinogona kunge riri rekuzvidira kana rekumanikidzwa. Zvinosungirwa, izvo zvinopa kodzero yekuchengetwa kwechinzvimbo uye kuverengwa kwehurefu hwekushanda kwayo, zvichapihwa nekugadzwa kana kusarudzwa kunzvimbo yeruzhinji zvinoita kuti zvikone kuenda kubasa. Kupindazve kunofanirwa kukumbirwa mukati memwedzi unotevera kumiswa kwehofisi yeruzhinji.
2. Mushandi ane rinosvika gore rimwe chete rehukuru mukambani ane kodzero yekuzivikanwa nekukwanisa kutora zororo rekuzvidira rekusavapo kwenguva isingasviki mwedzi mina uye isingasvike makore mashanu. Kodzero iyi inongogona kushandiswa zvakare nemushandi mumwe chete kana makore mana apfuura kubvira kupera kwezororo rekuzvidira rapfuura.
3. Vashandi vachave nekodzero yenguva yezororo yekusavapo kwenguva isingadarike makore matatu ekuchengeta mwana mumwe nemumwe, zvese zviri zvisikwa, sekugamuchirwa, kana panguva dzekuchengetwa nechinangwa chekurerwa zvachose kuchengetwa nevabereki vasiri vavo, kuverenga kubva pazuva rekuzvarwa kana, pazvinenge zvakakodzera, kubva pamatare edzimhosva kana ezvekutonga.
Vashandi kuti vachengete hama kusvika padanho repiri rekudyidzana kana kudyidzana vanozove nekodzero yenguva yezororo, isingagumi anopfuura makore maviri, kunze kwekunge nguva yakareba yasimbiswa nekubatana pamwe chete, pane zvikonzero zvezera, tsaona, kurwara kana hurema hazvigoni kuzviriritira, uye hazviite basa rakabhadharwa.
Zororo rekusavapo rinofungidzirwa muchikamu chino, iyo nguva inogona kunakidzwa nenzira yakatsemuka, inoratidzira kodzero yemunhu wega yevashandi, varume kana vakadzi. Nekudaro, kana vaviri kana vanopfuura vashandi vekambani imwe chete vakaunza kodzero iyi nebato rimwechete rinokonzera, mushandirwi anogona kudzikamisa kurovera panguva imwe chete nezvikonzero zvine musoro zvekushanda kwekambani.
Kana chinyowani chinokonzeresa chinopa kodzero yenguva nyowani yezororo, kutanga kweiyo imwechete kunopedzisa iyo, kana zvichibvira, yanga ichinakidzwa.
Iyo nguva iyo mushandi anoramba ari pazororo rekusavapo zvinoenderana nezvakapihwa muchinyorwa chino zvichaverengerwa zvehukuru zvinangwa uye mushandi achave nekodzero yekuenda kumakosi ekudzidzira hunyanzvi, uyo kutora chikamu kunofanira kushevedzwa nemushandirwi, kunyanya aine chiitiko yekudzorerwa kwake. Pakati pegore rekutanga uchave nekodzero yekuchengetedza basa rako. Mushure menguva ino, kuchengetwa kunozoendeswa kune rimwe basa muboka rimwechete revanyanzvi kana chikamu chakaenzana.
Nekudaro, kana munhu anoshanda ari chikamu chemhuri inozivikanwa semhuri hombe, kuchengetwa kwebasa ravo kuchawedzerwa kusvika pamwedzi gumi neshanu mune yemhuri hombe yechizhinji chikamu, uye kusvika kune imwechete yepamusoro yemwedzi gumi nemasere kana iri chikamu chakakosha. Kana munhu akashandisa kodzero iyi nehurefu hwakaenzana uye nehutongi semumwe mubereki, kuchengetedzwa kwebasa kuchawedzerwa kusvika pamwedzi gumi nesere.
4. Saizvozvowo, vashandi vanoita mapurovhinzi kana epamusoro mabasa emubatanidzwa kwenguva yekushandisa kwavo chinzvimbo chemumiriri vanogona kukumbira kuenda kwavo kumamiriro ekuzorora kwekusavapo mukambani.
5. Mushandi pazororo rekuzvidira anongoramba aine kodzero yakasarudzika yekupindazve munzvimbo dzechikamu chakafanana kana chakafanana kune chake zviripo kana zvinoitika mukambani.
"Mamiriro ezvinhu ekuzorora anogona kuwedzerwa kune dzimwe nyaya dzakabvumiranwa pamwe chete, nehutongi nemhedzisiro yacho."
Kubva pane zviri pamusoro, tinogona tsanangura zororo rekuzvidira semamiriro ezvinhu ekuti mushandi anokumbira kumiswa kwechibvumirano chebasa kubva kukambani yake. Nenzira iyi, kunyange mushandi haafanire kuenda kubasa. Kana iyo kambani haifanirwe kumubhadharira muhoro wake, kana kutomupa mari.
Sezvo iri yekuzvidira, zvinoreva kuti ndiye mushandi anoikumbira, chero chikonzero, pasina kupa tsananguro kukambani. Kunze kwekuti iko kuitwe mukutenda kwakanaka.
Ehezve, izvi zvine huwandu hwezviitiko zvinofanirwa kutarisirwa.
Ndiani anogona kukumbira zororo rekuzvidira
Kuti ukumbire zororo rekuzvidira zvakakosha kuti nhevedzano ye zvinodiwa zvinova:
Kuti iwe une chibvumirano chebasa nekambani.
Icho chine pazera zera regore rimwe.
Haana kunyorera zororo rekuzvidira rekusavapo mumakore mana apfuura.
Kana zvese izvi zvaitwa, unogona kutanga mapepa. Inofanirwa kutariswa, sezvazvinotaurwa muET, kuti izvi zvichave zvirinani kwemwedzi mina uye makore mashanu apfuura.
Chaizvoizvo, iyo ET inogadzira nzira dzakasiyana dzerudzi urwu rwezororo rekusavapo. Asi hazvireve kuti mune iwo chete mamiriro ezvinhu ndimo maunogona kukumbirwa. Muchokwadi, inogona kurairwa chero chikonzero pasina kupihwa tsananguro kukambani pachayo.
Maitiro ekukumbira zororo rekuzvidira rekusavapo
Kana mushure mezvawakaverenga iwe uchifunga kuti ndizvo zvaunofanira kuita, zvakakosha kuti iwe uzive matanho api aunofanirwa kutora kukumbira zororo rekuzvidira rekusavapo.
Mune ino kesi, Chinhu chekutanga chichava kunyora tsamba nemushandi uko kwaanotaurira kukambani kushandiswa kwekodzero yekuda kwekusiya kwekusavapo. Mune gwaro iri hazvidiwe kudoma zvikonzero zvinokutungamira kune izvi. Asi pane chinguva, zvese pakutanga nekuguma. Uye zvakare, iwe unofanirwa kuziva kana paine mashoma nguva yekucheresa pasi peChibatanidzwa Chibvumirano. Uye kana pasina, zvinokurudzirwa kuzivisa kukambani nekukurumidza kuitira kuti igone kupindura (zvine mutsindo kana zvisina kunaka) kuchikumbiro.
Mune ino kesi, iwe unogona kuwana fungidziro mbiri:
Iyo kambani inogamuchira yako kurudyi. Mune ino kesi, kana zuva rawakatema sekutanga rasvika, hukama hwebasa hunomiswa, husina kutyorwa. Mushure menguva, chero bedzi isati yapfuura makore mashanu, iwe unozokwanisa kudzosera patsva pese panenge paine nzvimbo.
Iyo kambani haigamuchire yako kodzero. Iwe uchafanirwa kumhan'ara kutyora kodzero uye, kudzamara paine chisarudzo chakasimba chekutonga, uchafanirwa kuramba uchishanda. Mumamiriro ezvinhu aya, vashandi vazhinji vanopedzisira vokumbira kudzingwa kwekuzvidira kana zvisingaite kuyananisa dambudziko rakatungamira kuzororo rekuzvidira rekusavapo nezuva rekushanda.
Hapana mamiriro ezvinhu mushandi anofanirwa kurega kuenda kubasa kwake, nekuti kana akadaro, kambani inogona kumudzinga nekusiya basa. Kana iyo kambani ikasapindura kuchikumbiro, senge mune yekusagamuchirwa, zvichave zvakakodzera kumhan'arira uye kumirira mhedzisiro yeiyi.
Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuziva nezve yekuzvidira zororo ndechekuti, kana iwe ukachikumbira icho, kambani haina kusungirwa kukuchengetera basa rako iwe. Mune mamwe mazwi, kana iwe uchida kudzokera kukambani, haifanirwe kukupa iro iro basa rawaimbove naro. Muchokwadi, izvo zvauchange uine ingori chete kodzero yekusarudzazve kupinda-mukati. Izvi zvinorevei? Zvakanaka, kana paine chero chinzvimbo munzvimbo yechimwechete kana chakafanana chikamu, ivo vachakupa icho kwauri.
Nekudaro, izvo hazvireve kuti, neChibvumirano Chibvumirano, kana nemimwe mirawo inotonga manejimendi yekambani, mamwe maitiro haakwanise kusimbiswa. Semuenzaniso, kana paine nzvimbo yekuchengeterwa kwenguva yakati rebei, uye mushure meizvi ingori yekusarudzazve kupinda.
Maitiro ekukumbira kupinda-zvakare kukambani
Kunze kwekuti makore mashanu asati apfuura kubva pazororo rekuzvidira, mushandi anogona kukumbira kambani, nekunyora, kukumbira kudzokerazve kubasa.
La Iyo kambani inofanirwa kudzidza ichi chikumbiro, ichidzidza iwo mabasa anogona kuvapo uye kupindura kuchikumbiro icho. Izvi zvinokurudzirwa kuti uite nekukurumidza sezvazvinogona, kunyanya nekuti padyo nekupera kwezororo rekuzvidira, zvichanyanya kuipa.
Kana iri mhinduro yekambani, unogona kuzviwana uine sarudzo dzakawanda:
Izvo hazvipindure: Iwe uchafanirwa kumhan'arira kodzero yako yekupindazve (izvo zvisiri kutarisirwa), pamusoro pekudzingwa. Nezvinangwa zvepamutemo, chokwadi chekuti kambani haina kupindura mukati menguva yakati wandei chakaenzana nekudzingwa, uye zvingave zvakakodzera kumhan'ara.
Gamuchira chikumbiro: Iyo kambani ichapa mushandi basa reiyo yakafanana kana yakafanana chikamu uye mushandi anogona kugamuchira kana kwete. Kana iwe uchibvuma, unogona kudzokera kubasa; kana zvisiri, saka zvinoita sekunge iye pachake akaonekana (kunze kwekunge izvo zvaakapihwa zvaive zvisiri zvechikamu chimwe chete kana zvakafanana).
Haigamuchire iko kunyorera asi haina kuramba kupinda zvakare: Izvi zvinowanzoitika kana makambani asina mabasa panguva idzodzo. Uye, saka, mushandi haakwanise kujoina zvakare. Iwe unofanirwa kumirira kwechinguva kuti unyore zvekare kuti upinde-kupinda.
Usabvume kunyorera uye haudi kupindazve: Iyo inokodzera sekudzingwa, uye saka kambani inogona kumhan'arwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Zororo rekuzvidira
Chii chinonzi kudzinga basa